Maumbirwo Emakambani uye Masangano Ehurongwa
Kunyangwe iwe uchibatanidza kana kuumba iyo LLC kune rako bhizinesi, iwe unenge uine yakarongeka manejimendi mamiriro ayo anoteedzana nemamwe maitiro. Makambani akajairika mune zvakasikwa uye maAdvs anopa kuwedzera kuchinjika. Kupinza rako bhizinesi seimwe muridzi sangano zvinoreva kuti iwe uchazofanira kuzadza chigaro chega chega muchimiro chesangano rebhizinesi rako rakabatanidzwa.
"Kugadzikana kwemanejimendi kunobatsira sekuchengetedzwa kwemutoro uye mabhenefiti emitero."
Corporate Management Sisitimu
Kana iwe ukabatanidza, kana kuumba Sangano, iwe unenge uine yakarongeka matatu-matanho mamiriro eane manejimendi manejimendi. Vagovani varidzi bhizinesi, Bhodhi revatungamiriri rinosarudza vakuru uye rinoita sarudzo dzepamusoro, ukuwo maofficial achimhanya zuva nezuva zviitiko zvebhizinesi. Kupinza rako bhizinesi seSangano kunogona kuitwa nemunhu mumwe chete mumatunhu mazhinji, zvisinei iwe unofanirwa kutarisa mumitemo yenyika yako yekubatanidzwa. Mune zvimwe zviitiko kana paine vanogovana vanopfuura mumwe chete, panofanirwa kuve nevatungamiriri vanopfuura mumwe.
Vashandi Vemubatanidzwa ndivo varidzi veMakambani. Chero ani zvake ane chikamu chemasheya muChechi mubatanidzwa weSangano. Chero chenguva dzose C Corporation inogona kuve neyakaganhurirwa huwandu hwevanogovana. Yakanyatso kubatwa uye Sub Chitsauko S Makambani ane akasiyana maranho pane izvi uye anotongwa nehurumende mvumo. Zvichienderana nehuwandu hwekufarira hunochengetwa neMugovani, panogona kuve nedanho rakasiyana rekufarira mune zvisarudzo zvebhizinesi, vamwe vagovani vanoita basa rinoshanda mukutarisa kuti ndiani anosarudzwa kubata bhizinesi. Mugovani haamhanye bhizinesi kana kuitarisira neimwe nzira. Vashandi vanogovana vanozoita bhizinesi uye vanovhota pazvinhu zvikuru zvebhizinesi. Vatungamiriri.
Vashandi vanogona kuita zvakakosha pabhizinesi nekusarudza maDhairekitori ane chiono chakagovaniswa chekutungamira kwebhizinesi pamwe nekuvhota kubvisa maDirector ayo asingaenderane nekutungamira kweMugovani. Vashandi vane kodzero yakajeka yekubvumirwa kwezvinhu zvikuru zvemabhizimisi, zvakadai sekuwana, kubatanidzwa, kuparara uye kutengeswa kwezvinhu.
Bhodhi revatungamiriri rine chinhanho chekubata mukutungamira kwebhizinesi. Vatungamiriri vanovhoterwa neMasheya uye vanoita musangano wepagore kana vachinge vavhoterwa. Vatungamiriri vanoita chiono cheSangano nekusarudza maCorporate Mahofisi, kumisikidza mashandiro, kuwedzera bhizinesi uye kubvumidza sarudzo dzemari. Bhodhi revatungamiriri harina hushoma kana hukuru saizi, izvi zvinoenderana nesaizi yebhizinesi rako.
Vatungamiriri vanofanirwa kuita vakamirira bhizinesi 'zvakanakira uye mune chero chiitiko chakakanganiswa, mutemo wenyika unogona kubata munhu iyeye pachake mutoro wechisarudzo. Madhairekita anofanirwa kuita aine vavariro dzakavimbika uye kuvimbika kune iyo Sangano, vachiisa zvido zvavo zvechipiri. Vatungamiriri vanoona kuti marongero emitemo anoitwa uye anotarisira zviitiko zvebhizinesi.
Mahofisi anosarudzwa neBhodi revatungamiriri. Hofisi yega yega ine basa chairo nebasa. Makambani ane zvigaro zvina zvevakuru vakuru, Mutungamiri, Mutevedzeri weMutungamiri, Treasurer uye Secretary. Mahofisi anoita zviitiko zvezuva nezuva zvebhizinesi. Mamwe mazita anofananidzwa nezvigaro zvakajairika, zvakaita seMukuru (Chief Executive Officer) uye CFO (Chief Financial Officer) uye zvakajairika kutaurirana.
Maofficial ari maoko-nezviitwa zvezuva nezuva zvebhizinesi, kutarisa vashandi uye mashandiro eSangano. Mumakambani madiki, zvinzvimbo zvevakuru zvinowanzo zadzwa nevanogovana uye chete mahofisi echinyakare anozadzwa.
mutungamiriri wenyika: Inotakura ruzhinji rwemutoro wekumisikidzwa kwesangano rekambani. Inosaina makondirakiti makuru uye zvinyorwa zviri pamutemo pachinzvimbo chebhizinesi. Mhinduro kuBhodi revatungamiriri.
Vice President: Kunyangwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika anowanzove anotsiva hofisi yeMutungamiriri kana paine kufa kana kudzingwa, Mutevedzeri weMutungamiri ndiye mukuru webhizinesi. Vatungamiriri vanosarudza maofficial uye maBylaws anogona kunge aine zvigadzirwa zvekuwanika zviitiko munzvimbo yemukuru.
munyori: Inochengetedza zvinyorwa zvemakambani nemabhuku.
Muchengeti: Inotarisira zvinyorwa zvemari, mashandiro ekuverenga uye kutengeserana.
Yakatemerwa Chikwereti Kambani Management Sisitimu
LLC's inotarisirwa nevaridzi, kana nhengo dzekambani. Imwe nzira ndeyekusarudza nhengo dzakananga kuve mamaneja ebhizinesi. Nekutadza nyika LLC mutemo unopa kuti kambani ichafambiswa nenhengo dzese. Chibvumirano chako chekushanda chinogona kupa yako wega manejimendi modhi nevanhu vakasarudzwa avo vane basa rekushandisa bhizinesi.
Nhengo dze LLC ndivo varidzi. Chero ani anobata LLC kufarira mukambani inhengo. Nokusingaperi LLC mutemo, sarudzo dzekambani dzinofanirwa kuitwa nemvumo yenhengo dzese. Nhengo dzichatarisira iyo LLC mune iyi kesi uye inonzi "Nhengo Inotarisirwa".
Chero LLC inogona kugadza nhengo kana munhu wechibvumirano chekunze kuti agadzirise zviitiko zvekambani. Izvi zvinopa kudzora padhuze kwebhizinesi uye kuwanikwa kuti dzimwe nhengo dziite basa rekuita pasangano. Iyi manejimendi inodaidzwa zvisingaite "Manager Managed".